Waa tan sida dadaalka yar loogaga khafiifiyo dabka jikada oo looga dhigo kuwo cusub - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Waa tan sida dadaalka yar loogaga khafiifiyo dabka jikada oo looga dhigo kuwo cusub - SANTE PLUS MAG
By TELES RELAY	 On Feb 16, 2021
Waa aaladda ay jecel yihiin taageerayaasha jikada. Halka qaar ay doorbidaan hobsiga induction, kuwa kale waxay doortaan fudeyd leh dhalooyinka dhoobada dhoobada ah, qaar kalena waxay doorbidayaan isku haleynta gaaska gubta. Wax kastoo aad doorato, hawluhu si dhakhso leh ayey isugu ururayaan hadaad uso deyso wasakhda. Halkan waxaa ku yaal aragti guud oo ku saabsan talooyinka ayeeyooyinka ee ku saabsan nadaafadda hobs-ka.
Nadiifi shooladda gaaska - Isha: Jacaylka Lagu Ogaado
1) Ku nadiifi go'yaasha wax lagu dubo soodhaha
Soodhaha dubista ayaa ka muuqda xagga sare ee liiska alaabta nadiifinta beddelaad Waad ku mahadsan tahay sifooyinka astringent iyo bakteeriyada, way u oggolaaneysaa qashinka si qoto dheer uga saar jeermiskaagana ku nadiifi. Si aad ugu nadiifiso go'yaashaada wax lagu dubo sheygan mucjisada ah, kaliya ku rushee sheyga qaybaha ay dhibaatadu saameysey una daa inaad wax ka qabato saacad. Kadib isticmaal isbuunyo qoyan si aad u nadiifiso saxamada kuna qallajiso maro microfiber ah.
2) Ku nadiifi xaashiyaha wax lagu dubo khal
Khamri waa wax soo saar badan oo qoys. Cilmiga deegaanka, dhaqaalaha iyo dabiicigaba, way ogolaaneysaa ka takhalus wasakhda madaxa adag. Dhalada buufiska ah, ku shub khal, ku qaso biyo yar kuna dar dhawr dhibcood oo ah saliida aad ugu jeceshahay. Buufin, ka tag dhowr daqiiqadood, xoq, maydh, qalalan.
3) Ku nadiifi go'yaasha wax lagu dubo dhoobada
Dhoobo waa heer sare oo dabiici ah. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa dhoobo cagaaran. Haddii kan dambe la og yahay inuu nuugo wasakhda ka timaadda maqaarka iyo timaha, sidaas oo kale ayaa kaa lushaya. Tan awgeed waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho dhagax dhoobo ah. Ku dhaji isbuunyo qoyan ka hor intaadan xoqin dusha sare ee ay saameysay. Biyo raaci, qalalan, waa nadiif!
Nadiifi dabka karinta - Isha: Whirlpool
4) Ku nadiifi go'yaasha wax lagu dubo saabuun madow
Saabuunta madow waa nadiifiye dabiici ah oo wax baabi'iya ugu waxtarka badan. Qadarka aad isticmaaleyso wuxuu ku xirnaan doonaa sida ay saxaradaadu u wasakhoobeen. Ku dhaji dab yar oo saabuun madow ah isbuunyo qoyan, ka dibna xoq aagga ay dhibaatadu saameysey ka hor intaadan mayrin. Xusuusnow inaad ku qalajiso tuwaal microfiber ah.
5) Ku nadiifi gaaska kuleylka dusha sare
Si loo nadiifiyo gaaska gubta, waxaa ku jira maado cabsi leh: saabuunta Marseille. Si tan loo sameeyo, waxaad gubi kartaa gubiyaashaada weel ay ku jiraan Biyaha saabuunta ee Marseille iyo hal galaas oo khal khal ah. Ku xoq iyaga oo isbuunyo ka dibna ku biyo raaci biyo nadiif ah. Ku qallaji tuwaal microfiber ka hor intaadan dib ugu celin karin shooladda.
6) Ku nadiifi shabakadaha xaashidaada dubista khalka cad iyo soodhaha
Waxaa jira dariiq lagu hubiyo in laga takhaluso wasakhda madax adag ee ku jirta weelka wax lagu kariyo. Waa ku filan tahay in la dhex geliyo isku dar ah khal cad, soodhada iyo cusbo aan badnayn. Ka tag habeenkii. Haddii hadhaaga qaar sii jiro, ku xoq dhinaca ku xoqdo isbuunyada ka dibna ku biyo raaci biyo nadiif ah.
Nadiifi shooladda gaaska - Isha: Shutterstock
7) Ku nadiifi fiilooyinka korontada ku shaqeeya aluminium
Kuleylka dartiis, nabarro aan fiicnayn ayaa ku dhegi kara hotplate-ka. Iyaga si ay dib ugu soo ceshadaan dhalaalkooda hore, waxaa jira xal fudud oo wax ku ool ah. Taas awgeed, ku duub foornada aluminium oo si xoogan ugu xoq dhaqdhaqaaqyada wareega. Aluminiumku wuxuu leeyahay adeegsiyo badan. Baro 7 talooyin oo leh aluminium aluminium ah oo dad badani aysan ogeyn.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.santeplusmag.com/voici-comment-degraisser-les-feux-de-cuisine-sans-effort-et-les-rendre-comme-neufs/
Daaha gadaashiisa albaabka xiran ee shirkii G5 Sahel ee N'Djamena - Jeune Afrique
Rabshada guriga, soo ridida qasabka ah, Afrimma: Dhamaan waxa ku saabsan fadeexada Sidiki Diabate - Mamacita - Video